यो केवल केही जातिहरु अवस्थित छैन भनेर जस्तो हुनेछ! Korotkonosye आकर्षक, hairless Sphynx, घुम्रेको Rex, tailless Bobtail, असामान्य कान संग कर्ल, कर्ल ... यो पहिले नै चकित केही जस्तो देखिन्छ। तर, आफ्नो उपस्थिति पनि अनुभवी प्रजनकों हिट गर्न सक्षम छ जो बिरालोहरु को एक नस्ल छ। यो munchkin।
Munchkin साथै संसारमा सबैभन्दा असामान्य बिरालो हुन दावी गर्न सक्छ। यो कुनै पनि अन्य जात संग भ्रममा असम्भव छ धन्यवाद जो आफ्नो विशिष्ठ सुविधा, यसलाई असामान्य छोटो खुट्टा छ। अक्सर Munchkin बिरालो ट्याक्सी भनिन्छ, र यो तुलना सायद सबैभन्दा aptly छ यसको उपस्थिति वर्णन गर्दछ। केही मानिसहरू कारण आफ्नो शरीर को संरचना को प्रकृति केही वा अशक्तताको मा Munchkin बाल्न तयार सबै को उपस्थिति समान तर्साउन। तथापि, यस कारण, प्रत्यक्ष उहाँलाई देखेको कहिल्यै गरेका मात्र ती। वास्तवमा, गतिविधि र playfulness छोटो खुट्टा यी बिरालोहरु कुनै पनि साधारण बिरालो बाधा, र तिनीहरूले शायद आफ्नो समकक्षों dlinnolapyh भन्दा ढिलो सार्न। र तपाईंको अर्डर दण्ड दिनु गर्न उच्चतम समतल मा Munchkin आरोहण को क्षमता, बारे केही, तपाईं आफ्नो खुसी मालिक बारेमा धेरै बताउन सक्छ। Munchkin स्वास्थ्य मा सबै गुनासो छैन, यसलाई बुझ्ने छ - सबै पछि, उहाँले नीलो-blooded व्युत्पत्ति आउँछ, तर सबै भन्दा साधारण घरेलू बिरालोहरु देखि। यो अचम्मको लाग्न सक्छ, तर मानिसहरूले यस असामान्य नस्ल को चयन कम्तिमा प्रयास राखे। हो, र छोटो खुट्टा संग नस्ल बिरालोहरु हालै मात्र आधिकारिक थिए - पछिल्लो शताब्दीको 90 को दशक मा।
को बीसौँ शताब्दीका भर, थप एक पटक भन्दा असामान्य छोटो खुट्टा संग बिरालोहरु को sightings रेकर्ड भयो। सायद, तिनीहरूले भयो छ, र धेरै पहिले, बस बारेमा कुनै थप वृत्तचित्र प्रमाण। युरोप मा, अमेरिका, र पनि रूस मा - र यो मा लगभग सबै दुनिया भर हुन्छ। तर, दुर्भाग्य, यी अद्वितीय वस्तुहरूको प्रजनकों को हात मा समावेश र त्यसैले हामी कुनै पनि निशान छोडेर छैन। यस पक्षलाई मा वरिपरि हेर्न क्षमता लागि, यो कङगारु जस्तै, स्तम्भ बसिरहेका बिरालो र कङगारु - तिनीहरूले पनि उपनाम दिइएको। र एक Munchkin संग कसैले यो peculiarity पुष्टि गर्छ।
यसको आधुनिक नाम - munchkin, छोटो-खुट्टे बिरालो gnomes, लोकप्रिय छोराछोरीको पुस्तकबाट वर्ण कुलका सम्मान मा पायो "Oz को अद्भुत विजार्ड।" एउटा सरकारी नस्ल तिनीहरूले पहिलो 1991 मा शुरू थिए, र तब देखि संसारभरि आफ्नो विजयोल्लास मार्च थाले। Munchkin मानिसहरूको हृदय जित्न एउटा अद्भुत गुण छ। सायद यो आफ्नो असामान्य उपस्थिति एक योग्य छ, र एक धेरै अनुकूल प्रकृति, उच्च बुद्धि र असाधारण playfulness हुन सक्छ। हो, तपाईंले किनभने यसको असामान्य संरचना को, छोटो खुट्टा संग बिरालोहरु तरिका सक्रिय खेल को संभावना मा तोकियो भनेर लाग्यो भने निकै गलत हो। यो बिल्कुल छैन साँचो छ! तिनीहरू सबै छन् - एक बल पछि, सजिलै माथिवाला समतल र धेरै, धेरै मा चढ्नु चलिरहेको झिंगा पक्रने।
यो नस्ल को सबै बिरालोहरु छोटो खुट्टा छ। munchkins को फोहर फाल्न मा सामान्य लम्बाई संग छोटो खुट्टा र पंजे पंजे संग बिरालोको बच्चाहरुको जन्म छन्। दुवै प्रकारका व्यापक भविष्य प्रजनन मा प्रयोग गरिन्छ। आमाबाबुले एक जोडी दुई मानक munchkins को या त समावेश हुन सक्छ, वा एक मानक र एक dlinnolapogo देखि। हुनत गैर-मानक व्यक्तिहरूलाई छैन छोटो खुट्टा को जीन, यद्यपि, यो प्रजनन आफ्नो सहभागिता आवश्यक छ, तिनीहरूले सन्तानहरू नस्ल प्रकार (टाउको, शरीर वा रोचक रंग को सही संरचना) इच्छित गर्ने पारित रूपमा बोक्न गर्छन्, तर। साथै, बिरालोको बच्चाहरुको को फोहर फाल्न, जसमा आमाबाबुले एक सामान्यतया थप धेरै dlinnolapy।
छोटो खुट्टा संग रूसी बिरालोहरु यति लामो समय पहिले थिएनन् - 2001 मा, तर पहिले नै धेरै admirers मिल्यो, व्यवसायीक बीचमा दुवै - प्रजनकों, साथै बीच साधारण बिरालो प्रेमीहरूको। र आज शायद munchkins संग वितरित गर्न कुनै पनि प्रमुख प्रदर्शनी हो। पाठ्यक्रम यद्यपि, अधिकांश मानिसहरू यी असामान्य बिरालोहरु जन्म दिन शो को लागि छैन, तर प्राण, र आफ्नो पाल्तु जनावर लागि "तारा रोग" विजेता छल्ले थाहा कहिल्यै हुनेछ, तर केवल आफ्नो संचार, ठट्टा र खेल को मालिक खुसी हुनेछ। आखिर, साँच्चै सधैं के converge र छ feline, र बिरालो प्रेमीहरूको सरल, किनभने munchkin कि आफ्नो राय मा - यो सिर्फ सही छ घर को लागि बिरालो र परिवार। यो korotkonogo चमत्कार को कुनै पनि मालिक सोध्न - के राम्रो हुन सक्छ Munchkin? र तपाईं जवाफ सुन्न छौँ - यो केवल दुई munchkin हुन सक्छ राम्रो छ!
कसरी लामो गोमक्खी बिरालोहरु र कुकुर मा?
माइकल Wittmann - SS-Hauptsturmführer, मास्टर ट्यांक लडाई। उद्धरण र वचनहरू, फोटो
यो प्रक्रियाको मुख्य चरणमा - कसरी विवाह व्यवस्थित गर्न।
पास्कल मा कार्यक्रम संरचना: शुरुआती लागि प्रोग्रामिङ
Cyclamen: वृद्धि विभिन्न अवधि मा हेरविचार
गर्भावस्था को समयमा एक्स-रेज खतरनाक छ हो?